စံဝင်းချို I am Forgiven and Loved, Lesson 3
ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့သည် သူကိုချစ်၍သာယာကြည်နူးမှုကိုပေးစေခြင်သည်။ ဘုရားသခင်ကို သာယာကြည်နူးမှုပေးနိုင်ရန် ကျွန်တော်သည် အကြောင်းအရာ နှစ်မျိုးကိုသိရန်လိုအပ်ပါသည်။
၁) ကျွန်တော်၏ အပြစ်များမှခွင့်လွှတ်ပြီးကြောင်းသိရမည်။
၂) ဘုရားသခင်သည် ယခုကျွန်တော်အပေါ်၌ ဘယ်လို ခံစားကြောင်း ကိုသိရမည်။
ကျွန်တော်တို့ သားငယ်တယောက်ကိုအလွန်ချစ်သော ဖခင်အကြောင်းစဉ်စားကြည့်ရအောင်။ ဖခင်တွင် တန်ဘိုးရှိသော နာရီတလုံးရှိသည်။ သူ၏သားကို သူ၏နာရီကိုဆော့ မကစားရန်၊ ပျက်စီးမည်ကို စိုးရိမ်၍ မှာထားသည်။
ဖခင်ကအပြင်သို့သွားသည်။ သားကနာရီကိုကြည့်သည်။ နာရီနှင့်ဆော့ရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ ဆော့သည်၊ သေသေချာချာ တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ဘဲ သားကြောင့်နာရီပျက်သည်။
ဖခင်ပြန်လာတော့၊ နာရီပျက်နေသည်ကိုတွေ့မြင်ရသည်။ သားက သူလုပ်ကြောင်းဝန်ခံသည်၊ မင်းငါ့ စကား နားမ ထောင် ဘူး၊ နာရီ ပြင်ပြီးသည်အထိ မင်းအခန်းထဲမှာ သွားနေရန် ဖခင်က မှာကြားသည်။
သားကလုံးဝ မပျော်ပါ၊ သူအဖေ စကားနားမထောင်မိ၍ မှားကြောင်းသိသည်။ ထိုအချိန်တွင် ဖခင်လဲ မပျော်ပါ၊ သူ၏သား ကိုချစ်သည်၊ ခွဲခွါနေရတာကို မခံနိုင်ပါ၊ ဒါပေမဲ့ သားစကားနားမထောင်သည်ကို ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်ရမည်။
ဖခင်ဘာလုပ်သဘဲ? နာရီကို ငါကိုယ်တိုင်ပြင်မည်ဟုပြောသည်။ နာရီကိုကောင်းစွာပြင်သည်၊ ပြင်ပြီးတော့ သားထံသွား သည်။ သားကဖခင်ကိုတွေ့တော့ ငို၍ ပြောသည်မှာ “ ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းပါ နာရီကို ဖျက်မိ၍၊ ပြင်လဲမပြင်တတ်ပါ။”
ဖခင်က သားကိုပွေ့ဖက်၍ နမ်းခါ “သားကိုခွင့်လွှတ်ပါတယ်၊ နာရီကိုလည်းကိုယ်တိုင်ပြင်ပြီးပါပြီ။”
သားသည်ယခု ဖခင်ကို သာယာကြည်နူးစေသည်။ သားသည်အကြောင်းအရာနှစ်ခုကို သိရပါသည်။ သူ၏အပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်ကြောင်း နှင့် သူ၏ဖခင်သူ့အပေါ်၌ ဘယ်ခိုခံစားကြောင်းသိရသည်။ “ကျွန်တော်၏ဖခင်သည် ကျွန်တော်ကိုဒီ လောက်ချစ်တာကို မသိခဲ့ပါ” ဟု ပြောသည်။
ကျွန်တော်တို့ ဘုရားသခင်စကားကို မနာခံဘဲနေသည်မှာ အကြိမ်များပြီ၊ သူက ကျွန်တော်တို့ကို သူ၏စိတ်နှလုံး အတွင်း မှချစ်သည်။ သူနှင့်ကျွန်တော်တို့ ခွဲခွါ၍နေခြင်းကိုသူမခံနိုင်ပါ၊ ကျွန်တော်တို့၏အပြစ်များကို ဂရုစိုက်ကြရမည်။
ဘုရားသခင်က သခင်ယေရှုကို ကျွန်ုပ်၏ သိုးအဖြစ်ပေးသည်။
ဓမ္မဟောင်းကျမ်းတွင်၊ ဘုရားသခင်က လူများကို တိရစ္ဆာန်၊ ယူလာကြရန်၊ ထုံးစံအတိုင်း သိုး၊ အပြစ်များအတွက် ပူဇော်ရန်။ လူသည် သိုးကို ယဇ်ပရောဟိတ် ထံယူခဲ့ရမည်။ သူ၏လက်ကို သိုး၏ဦးခေါင်းပေါ်တင်၍ စကားကိုအောက်ပါအတိုင်းပြောရ သည်၊“ကျွန်တော်၌ အပြစ်ရှိပါသည်၊ဒါပေမဲ့ ဘုရားသခင်ကဤသိုးကိုကျွန်တော်အပြစ်များအတွက် အသေခံရန်ခွင့်ပြုသည်” ထိုအခါသိုးသည်အသတ်ခံရပြီး၊ အသွေးများကိုသွန်းလောင်းသည်။
ဘုရားသခင်က သူ၏လူများကို ဘာသင်ပေးသလဲ? လူများကို အပြစ်သည် ဒီလို ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်း သော၊ အရာဖြစ်သည်၊ ဒီအပြစ် အတွက် တစုံတစ်ရာသည် အသေခံပေးရသည်။ ကျမ်းစာက
“ပညာတ်တရားအတိုင်း ခပ်သိမ်းသော အရာတို့ကို ကုန်မတတ် အသွေးအားဖြင့် စင်ကြယ်စေတတ်၏။ အသွေးမသွန်း လောင်းဘဲ အပြစ်လွှတ်ခြင်းမရှိ။ “ (ဟေဗြဲ ၉း၂၂)
လူ၏အပြစ်များအတွက် သိုး သေပေးရခြင်းသည်၊ တနေ့တွင် သခင်ယေရှု ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များအတွက်အသေခံပေးမည့် ရုပ်ပုံဖြစ်သည်။ သခင်ယေရှုလာသည့်အခါ ၊ ဗိတ္တိဇံ ယောဟန်က- “နက်ဖြန် နေ့၌ ယေရှု ကြွလာတော်မူသည်ကို ယောဟန်သည်မြင်လျှင်၊ ဤလောက၏ အပြစ်ကိုဆောင်သွားသောဘုရားသခင်၏ သိုးသငယ်ကိုကြည့်လော့။” (ယော ၁း၂၉)
သခင်ယေရှုကို “ဘုရားသခင်၏သိုးသငယ်” ဟုခေါ်ခြင်းသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့ ဘယ်လိုအဓိပ္ပါယ်ရသနည်း? သခင်ယေရှုသည်၊ အစဉ်နေသော (သို့မဟုတ်) အမြဲနေမည့် လူများ၏အပြစ်များ အတွက် စံထားလောက်သော၊ ယဇ်ပူဇော်ခြင်းတွင် ယဇ်ကောင် အဖြစ်၊ အသေခံခဲ့သည်ကို အဓိပ္ပါယ်ဆောင်ပါသည်။
ဘုရားသခင်က ပြောနေသလို၊ “နှစ်ပေါင်းထောင်ကြော်ခဲ့ပြီ၊ သင်တို့၏ သိုးများကို ငါ့ထံသို့ ယူဆောင်လာခဲ့ကြရသည်။ ယခု ငါ၏သိုးကို စီစဉ်ပေးသည်။ ငါ၏သားကို သင့်တို့၏ သိုးအဖြစ်ပေးသည်။”
သခင်ယေရှု လာရောက်၍ လူတွေအားလုံး၏အပြစ်များအတွက် စံထားလောက်သော ယဇ်ပူဇော်ခြင်းပြုခဲ့သည်။ သူလာ ရောက်လုပ်ကိုင်သည် အလုပ် ပြီးမြောက်ရဲ့လား? ဟုတ်ကဲ့စံထားလောက်အောင် ပြီးပါတယ်၊ သူမသေခင် အော်သည်မှာ “အမှုပြီးပြီဟုမိန့်တော်မူလျက်” ခေါင်းတော်ကိုငိုက်ဆိုက်ညွှတ်၍အသက်တော်ကိုစွန့်တော်မူ၏။ သူလာ ရောက်လုပ်ကိုင် သည် အလုပ် ပြီးမြောက်ပါသည်။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်တော်မူသည်။
ဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်တော်မူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သူ့အတွက်လုပ်ကိုင်ပေး၍မဟုတ်၊ သခင်ယေရှုက ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်ကပြောသည်၊ “ငါ၏သားကိုသင်တို့၏ ‘သိုး’ အဖြစ် ယုံကြည်မှုရှိလျှင်၊ ငါ မင်း တို့၏အပြစ်များ ကို ထာဝရ ခွင့်လွှတ်တော်မူမည်။” သခင်ယေရှု၏စကား၊ ကျမ်းစာက
“ထိုသခင်ကို ယုံကြည်သောသူရှိသမျှတို့သည် နာမတော်အားဖြင့် အပြစ်လွှတ်တော်မူခြင်း ကျေးဇူးကိုခံရကြ လတံ့ဟု ၍ ပရောဖက် အပေါင်း တို့သည် ထိုသခင်၏ သက်သေခံဖြစ်ကြသည်ဟု ပေတရု မြွက်ဆို၏။” ( တ ၁၀း၄၃)
ဘုရားသခင်ကျွန်တော်၏အပြစ်များကိုထာဝရ ခွင့်လွှတ်သည်။ ဘုရားသခင် ကျွန်တော်ကိုပေးသော ခွင့်လွှတ်ခြင်းသည် သခင်ယေရှုကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံ ခြင်းကြောင့်၊ ထာဝရ ခွင့်လွှတ်ခြင်းရသည်။ ဤခွင့်လွှတ်ခြင်းသည်၊ ကျွန်တော်၏အပြစ်အာလုံး-ယခင် ၊ ယခု၊ နှင့် နောင် အပြစ်များအပါအ၀င်ဖြစ်သည်။
သင်စဉ်စားမည် ၊ “ဘုရားသခင်ကျွန်တော်၏ ယခင် နှင့် ယခု အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်ခြင်းကို ကျွန်တော်မြင်ရသည်။ ဒါပေမဲ့ နောင်လုပ်မည့် အပြစ်ကို ဘုရားသခင် ဘယ်လိုခွင့်လွှတ်မည်နည်း၊- ကျွန်တော်မလုပ်ရသေးသောအပြစ်ကို? “
ဘုရားသခင်အရာအားလုံးကိုသိသည်။ ယခင်၊ ယခု နှင့် နောင် ၊ သူကျွန်တော်၏အသက်တာကိုမြင်သည်၊ အစမှ အဆုံး အထိ၊ ဘုရားသခင်က သူ့သားကို ကျွန်တော်၏အပြစ်များအတွက် အသေခံပေးသည်။ သခင်ယေရှု သေသည့်အချိန်တွင်၊ ကျွန်တော်၏အပြစ်ဘယ်လောက်သည် နောင်ကာလ အတွက်ဖြစ်မည်နည်း? အားလုံးသည် နောင်အတွက်ဖြစ်မည်။ ဘုရားသခင်က အားလုံးကိုမြင်သည်။ သခင်ယေရှုကလည်းအားလုံးအတွက်အသေခံပေးသည်။
ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်၏အပြစ်အာလုံးကိုခွင့်လွှတ်သည်၊ ဘုရားသခင်က ၊ သူ၏သားသမီးများ၏အပြစ်ကို တခုတလေမှ မချန်ပါ။ ကျွန်တော်တို့၏အပြစ်အာလုံးသည် သူ့ရှေ့မှလုံးဝပျောက်ကွယ်သည်။ သူကပြောသည်၊ သူသတိမရတော့ဘူး။ ဘုရားကပြောတာ “တဖန်တုံ၊ သူတို့ပြစ်မှားခြင်း၊ လွန်ကျူးခြင်း အမျိုးမျိုးကို ငါမအောက်မေ့ဘဲ နေမည် ဟု လာသတည်း” (ဟေဗြဲ ၁၀း၁၇)
ကယ်တင်ခြင်းရပြီး အပြစ်လုပ်မိလျှင် ဘာဖြစ်နိုင်မလဲ။
သခင်ခရစ်တော်ကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်လက်ခံတာနဲ့၊ ဘုရားသခင်က ထာဝရ ခွင့်လွှတ်ခြင်း ကိုပေးသည်။ ဤအရာသည် ကျွန်တော်၏အပြစ်အားလုံးကိုခွင့်လွှတ်သည်။ ယခင်၊ ယခု နှင့် နောင်အပါအ၀င်။ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်တော်၏ ကောင်း ကင်ဘုံမှ ဖခင်ဖြစ်၍ ကျွန်တော်သည်သူ၏ သား ထာဝရဖြစ်ရသည်။
ယခုကျွန်တော်အပြစ်လုပ်မိရင်၊ ကောင်းကင်ဘုံမှ ဖခင်နှင့်တော်စပ်မှုဆုံးရှုံးသည်မရှိပါ။ ကျွန်တော်သည်သူ၏သား အဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေပါသည်။ ကလေးငယ် ယောက်ျားလေး သူဖခင်နာရီဖျက်တုံးက၊ သူဟာ သူ့ဖခင်၏ခလေးဘဲ၊ ဒါပေမဲ့ သူ့ဖခင်နှင့်မိတ်သဟာရပျက်စေသည်။ ထိုကြောင့်သူဝမ်းနည်းရသည်။
အပြစ်သည် ကျွန်တော်၏ ကောင်းကင်ဘုံရှိ ဖခင်နှင့် မိတ်သဟာရပျက်စေသည်။ ကျွန်တော်၏ ပျော်ရွှင်ခြင်း ဆုံးရှုံးသည်။ ဒီလိုဖြစ်တော့ ခွင့်လွှတ်ခြင်း နောက်တမျိုး “မိတ်သဟာရ ခွင့်လွှတ်ခြင်း” လို့ခေါ်သည့်၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်း ကို ကျွန်တော် လိုအပ်သည်။
ကျွန်တော်၏ကောင်းကင်ဘုံမှ ဖခင်ကမှာထားသည်၊ ကျွန်တော်လုပ်ကိုင်ရန် လိုအပ်ချက်သည်၊ သူနှင့်လုပ်ကိုင်သည့်အခါ အကြောင်းအရာ၊ မှန်ကန်မှုရှိရန်လိုအပ်သည်။ ကျွန်တော်၏အပြစ်များကို သူထံ၌ ၀န်ခံရမည်။ ကျမ်းစာက
“ကိုယ်အပြစ်တို့ကို ဘော်ပြတောင်းပန်လျှင်၊ ငါတို့အပြစ်များကို လွှတ် ၍ ဒုစရိုက်ရှိသမျှနှင့် ကင်းစင်စေခြင်းငှါ ဘုရားသခင် သည် သစ္စာတရားနှင့်၎င်း ပြည့်စုံတော်မူ၏။ “ (၁ယော ၁း၉)
ကျွန်တော်သည် နောက်ထပ် တစ်စုံတစ်ယောက် ကို ဆန့်ကျင်၍ အပြစ်လုပ်မိခဲ့ပါက၊ ကျွန်တော်၏အပြစ် သူ့ကို ဖေါ်ပြ တောင်းပန်၍၊ အပြစ်ကို ခွင့်လွှတ်စေရမည်။ အကယ်၍ ဒေါသထွက်ပြီးတစ်ဦးတစ်ယောက်ကို ရိုင်းပြစွာ ပြောမိ လျှင်။ တောင်းပန်၍ အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်စေရမည်။ ထိုနောက် ဘုရားသခင်ထံလာပြီးဆုတောင်းရမည်။ အောက်ပါအတိုင်း တောင်းရမည်။
“ထာဝရ ဘုရားသခင် ကျွန်တော်သည် ဒေါသကိုမထိန်းနိုင်သဖြင့် ဦး-------ကို အမှားများပြောမိပါတယ်၊ သူကို အပြစ်ခွင့် လွှတ်ပေးရန်တောင်းပန်ပြီးပါပြီ။ ယခုကျွန်တော်၏အပြစ်ကို ၀န်ခံပါသည်။ ကျွန်တော်အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးရန် သခင်ခရစ် တော်၏ နာမတော်ကိုအမှီ၍ ဆုတောင်းပါသည်။”
ဘယ်အချိန်တွင်ဘုရားသခင်ထံတော်၌ အပြစ်ကိုဝန်ခံရမည်နည်း? ကျွန်တော်မှာအပြစ်ရှိကြောင်းသိတာနဲ့၊ အပြစ်ကိုဝန်ခံ ရမည်။ အချိန်ကို ဆွဲမထားပါနှင့်၊ ဘုရားသခင်ထံ ချက်ခြင်းဆုတောင်းပြီး၊ အပြစ်ကိုသူထံ၌၀န်ခံရမည်။ ကျွန်တော်ဆောင် ရွက်လျှင်၊ သူသည်ချက်ချင်း အပြစ်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးမည်။
ဘုရားသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ အပြစ်များကို ခွင့်လွှတ်ပေးခြင်း၌ ထူးကဲသော ကျေနပ်မှုရရှိသည်။
သခင်ခရစ်တော်သည် လာရောက်ပြီး ၊ ထာဝရဘုရားသခင်သည် ကျွန်ုပ်တို့အား သူ၏နှလုံးသားနှင့်ချစ်ကြောင်းကို ပြသ သည်၊ ပြောကြားသည်။ သခင်ခရစ်တော်က ကျွန်ုပ်တို့ ဘုရားသခင်၏အမှန်တရားကို နားလည်သဘောပေါက်ရန် ပုံပြင်၊ ဥပမာများ (Parables) ကိုအသုံးပြုသည်။
ရှင်လုကာခရစ်ဝင် အခန်းကြီး (၁၅) ၌ သခင်ခရစ်တော်က”အသုံးကြီးသောသား” အသုံးကြီး အဓိပ္ပါယ် မှာ ဖြုန်းတီး သော၊ မနာခံသောသူ။ ဒီပုံပြင်မှာ ဖခင်သည် ဘုရားသခင်ကိုကိုယ်စားပြုသည်၊ အသုံးကြီးသောသားသည် ခင်ဗျား နှင့် ကျွန်တော် တို့ကိုကိုယ်စားပြုသည်။
ဒီပုံပြင်၊ ဥပမာ ၌ ယုံမှားဖွယ်မရှိသော၊ လူတွင်သားနှစ်ယောက်ရှိသည်။ သားငယ်သည် အိမ်မှအပြင်သို့ထွက်၍ သူစိတ် ကူးပေါက်တာတွေကို လုပ်ခြင်သည်။ သူ၏ဖခင်ကို သူတို့ မိသားစုပိုင်ငွေထဲမှ သူ၏ ဝေစုကိုတောင်းခံသည်။ သူ၏ဖခင်က သားအပေါ်မယုံသင်္ကာမရှိပါ၊ အိမ်မှာ ဘဲနေရန်တောင်းပန်သည်။ ဒါပေမဲ့ သားက ခိုင်ခိုင်မာမာဆုံးဖြတ်ထားသည်အတိုင်းဘဲ လုပ်ချင်သည်။
ဖခင်က သားငယ်၏ ဝေစုကို သူ၏ ဓနဥစ္စာထဲမှပေးသည်။ သားငယ်ကသူရသော ဝေစုကိုယူပြီး၊ ဝေးသော နိုင်ငံသို. ခရီး ထွက်ခဲ့သည်။ထိုနေရာတွင်သူရသော အမွေကို ဖြုန်းတီး၍လွဲမှားသော သာယာမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။
သားငယ်သည်သူ၏ငွေ ဖြင့် အပြစ်များကျူးလွန်ပြီး၊ ဖြုန်းလိုက်သဖြင့်၊ အစားဝယ်စားရန်တောင်ငွေမရှိတော့ပါ။ ဒီအပြင်၊ ငတ်မွတ်ခြင်းဘေးကြီးသည်၊ ထိုနယ်မြေတွင်ကျရောက်သည်။ မိုးမရွာသည်မှာ ကြာပြီဖြစ်၍ လယ်သမားများလည်း စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများ၊ မလုပ်ကိုင်နိုင်ကြပါ။
သားငယ်သည် ဆိုးဝါးသောအခြေအနေသို့သူရောက်ရှိနေပြီကိုသိသည်။ သူသည်ညစ်ပတ် စုတ်ပြတ်နေပြီ။ သူရနိုင်သောအ လုပ်သည်လည်း ၀က်များကိုစောင့်ရှောက်ပြုစုခြင်း။ သူသည်အလွန်စာလောင်သဖြင့် ၀က်များကိုကျွေးသည်၊ ၀က်စာများကို တောင်မှ စားခြင် စိတ်ပေါက်လာသည်။
တနေ့တော့ သူ၏ဖခင်အိမ်ကိုသတိရစဉ်စားမိသည်။ အိမ်မှကောင်းမွန်သောအရာများကိုသတိရသည်၊ သူကပြောသည်၊ “အဖေငှါးထားသည့်အလုပ်သမားများ ပေါင်မုန့်လုံလောက်၍ ပိုသဖြင့်တောင်၊ ဝေနိုင်ကြသေးသည်။ ကျွန်တော်မှာ စာလောင် မွတ်သိတ် ခြင်းကြောင့်ပျက်စီးသည်။ ကျွန်တော်မတ်တတ်ရပ်၍အဖေထံသွားမည်၊ အဖေကိုပြောမည် ‘အဖေ’ ကျွန်တော်သည်၊ ကောင်းကင်ဘုံ နှင့် အဖေအပေါ်မှာ အပြစ်များပြုလုပ်မိခဲ့ပါသည်၊ ဒါကြောင့် သားလို့ခေါ်ရန် တောင်မသင့် လျော်တော့ပါ၊ ကျွန်တော်ကို အဖေငှါးထားသည် အလုပ်သမားတစ်ယောက်လိုသာသတ်မှတ်ပါ။”
သူထ၍ ဖခင်ထံသွားတော့သည်၊ ဒီဟာကျမ်းစာထဲမှ “နောင်တရခြင်း။” နောင်တရခြင်းသည်၊ မှားယွင်းသောလမ်း ပေါ် မှာသွားနေ ကြောင်းကိုသိတာနှင့် ပြန်လှည့်၍ ဘုရားသခင်ထံသွားခြင်းသည် “နောင်တရခြင်း” ဖြစ်သည်။
သူပြန်လာရင်းစဉ်စားကြည့်မိသည်၊ သူ၏ဖခင် သူ့ကိုဘယ်လိုလက်ခံမည်နည်း? ဖခင်ဒေါသထွက်မလား? ဖခင်က မင်းလုပ်ခြင်တာလုပ်ပြီးမှပြန်မလာနှင့်ဟုများပြောမလား?
သူကိုဖခင်ကဘယ်လိုလက်ခံသလဲ? သခင်ယေရှု၏စကားများက “သူသည်အဝေးမှလာနေသည်ကိုဖခင်တွေ့သည်၊ အကြင်နာမေတ္တာဖြင့် သူထံပြေးလာ၍ သားလည်းပင်းကိုပွေ့ဖက်ခါ နမ်းသည်။”
ကျွန်ုပ်တို့ကို ဘုရားသခင် ဘယ်လို လက်ခံမည်နည်း?
သင်သည်လုံခြုံပြီဟုထင်သည်။ ဒါပေမဲ့ မသေခြာသေးဘူး၊ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်၊ဟုစိတ်နှစ်ခွဖြစ်သည်။ မယုံသင်္ကာ မဖြစ်ပါနှင့်၊ ဤကိစ္စကိုယခုပြီးပြတ်စေပါ၊ တစ်ကြိမ်ထဲနှင့်အားလုံးပြီးပြတ်အောင်။ သခင်ယေရှုကိုပြောပါ၊ “သခင်ယေရှု ကျွန်တော်၏အပြစ်များအတွက် သိုးသငယ်လို အသေခံပေးသည်ကိုအမှန်တကယ်မယုံသေးလျှင်၊ ယခုလုပ်ပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်၏ ကယ်တင်ရှင်အဖြစ်ယခုလက်ခံ၊ ယုံကြည်ပါပြီ။”
သင်သည်သခင်ယေရှုကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်ခဲ့တာ ကြာလောက်ပြီ၊ ဒါပေမဲ့သင်သည်သူ့ အတွက်အသက် ရှင်နေတာမဟုတ်သေးပါ၊ သင်သည်ဘုရားသခင်ထံပြန်လာခြင်သည်၊ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုလက်ခံမည်နည်းဆိုတာသိချင်သည်။ ငွေကိုရေလိုသုံးသည် သား၏ပုံပြင်က သင်ကို ဘုရားသခင် ဘယ်လိုလက်ခံမည်ဆိုတာကို သင်အားပြသခဲ့ပါသည်။
ကြာရှည်စောင့်မနေပါနှင့်၊ သူ့ထံကိုယခုလာပါ၊ သင်ယခုပုံစံအတိုင်းလာပါ။ သင်စတင်တွေ့မည်။ ဘုရားသခင်သည် အလွန်ကြင်နာတတ်သောသူ၊ ပို၍များစွာချစ်တတ်သောသူ၊ ဖြစ်ကြောင်းကို အမြဲစိတ်ကူးမိသည်များထက်သာကြောင်းကို တွေ့ရှိရမည်။ သူသည်သင့်ကို ၀မ်းမြောက်းဝမ်းသာပျော်ရွှင်စွာ၊ လက်ခံလိမ့်မည်။
ဘုရားသခင်ကို သာယာကြည်နူးမှုပေးရန်၊ ကျွန်တော်၏အပြစ်အားလုံးလွှတ်ပြီးကြောင်းကိုသိရမည်၊ကျွန်တော်၏ အပေါ်၌ ယခုဘယ်လိုခံစားကြောင်းသိရမည်၊ ကျွန်တော်အတွက် ဘုရားသခင်က၊ သခင်ယေရှုကို သိုးသငယ်လိုပေးခဲ့သည်။ ကျွန်တော်၏အပြစ်များအတွက်ဘုရားသခင်၏သားတော်သည်အသေခံခဲ့ရသည်။ကျွန်တော်၏သိုးအဖြစ်ကျွန်တော်ကယူ ခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော်၏အပြစ် အားလုံး ယခင်၊ ယခု၊ နောင် အားလုံးပါဝင်သည့် အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ပြီးဖြစ်သည်။ အားလုံးထဲမှ အကောင်းဆုံးသည်။ ယခုကျွန်တော့ အပေါ်၌ ဘုရားသခင် ဘယ်လိုခံစားကြောင်းသိရှိနားလည် လာပြီ၊ ဘုရားသခင်သည် ကျွန်တော်ကို သူ၏ စိတ်နှလုံး အတွင်းမှချစ်သည်။
“အဖဘုရားသခင်၊ သားတော်ကိုသိုးသငယ်အနေနှင့်ကျွန်တော်အား ပေးသည်ကိုယုံကြည်ပါသည်။ ဘုရားသခင်၏သား ထာဝရ ဖြစ်ရသောအခွင့်ကိုပေးသည့်အတွက်၊ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါသည်။ ကျွန်တော်အပေါ်မှာယခု ဘုရားသခင် ဘယ်လိုခံစားကြောင်း သိရသော ကြောင့်လည်းကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုစိတ်နှလုံး အတွင်း မှချစ်သည်၊ ကျွန်တော်ကလည်း စိတ်နှလုံးမှချစ်လိုပါသည်။ ကျွန်တော်ဘုရားသခင်၏ကျေနပ်နှစ်သိမ့်မှု ကိုလည်း ရလိုပါသည်။”
သင်ခန်းစာ (၃) ၏မေခွန်းများ
အမှား အမှန် ရွေးပါ
၁။ ဘုရားသခင် သာယာကြည်နူးမှုပေးရန်
ခ) ကျွန်တော်၏အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ပြီးကြောင်း နှင့် ဘုရားသခင်ယခုကျွန်တော်အပေါ်၌ဘယ်လို ခံစားကြောင်း ကိုသိရမည်။
၂။ ဓမ္မဟောင်းကျမ်းမှယဇ်ပူဇော်ခြင်းအကြောင်းကို ဘုရားသခင်က သူလူများကိုသင်ပေးသည်
က) အပြစ်သည်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသောကြောင့်၊အပြစ်အတွက် တစ်စုံတစ်ရာ အသေခံပေးရသည်။
က) သွေးဖြင့် ယဇ်ပူဇော်ခြင်း။
ခ) သခင်ယေရှု တနေ့တွင်ကျွန်တော်တို့၏ အပြစ်များအတွက် အသေခံမည်ရုပ်ပုံ။
၄။ သခင်ယေရှုသည် “ဘုရားသခင်၏သိုး” ဆိုခြင်း၏အဓိပ္ပါယ်မှာ
ခ) သူသည်ပကတိ ပြည့်စုံ ကောင်းမွန်စွာ၊ လူများ၏အပြစ်များအတွက် ယဇ်ပူဇော်ခံသည်။
၅။ သခင်ခရစ်တော် သူလာ၍လုပ်သောအလုပ် ပြီးပါသလား?
ခ ) သူလာ ရောက်လုပ်ကိုင် သည် အလုပ် ပြီးမြောက်ပါသည်။
က) သခင်ခရစ်တော်ကျွန်ုပ်အတွက် ပြုလုပ်ပေးသောကြောင့်။
၇ ။ ဘုရားသခင်က အပြစ်မယူခွင့်လွှတ်ခြင်းဆိုသည်မှာ ဘုရားသခင်လူတို့၏ အပြစ်များကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းပြစ်သည်။
ခ) ကျွန်တော်၏အပြစ်များ ယခင်၊ ယခု နှင့် နောင်အပါအ၀င်ဖြစ်သည်။
၈။ ကယ်တင်ခြင်းရပြီး အပြစ်လုပ်မိလျှင် အပြစ်ကြောင့်
က) ကျွန်တော်၏ ကောင်းကင်ဘုံရှိသော ဖခင်နှင့် မိတ်သဟာရ ပျက်စေသည်။ ကျွန်တော်၏ ပျော်ရွှင်ခြင်း ဆုံးရှုံးသည်။
ခ) ကောင်းကင်ဘုံမှ ဖခင်နှင့် တော်စပ်မှု၊ ကျွန်တော်သည်သူ၏သား အဖြစ်ဆက်လက်မရှိတော့ပါ။
၉။ အသုံးကြီးသောသားပြန်လာသောအခါ၊ သူဖခင်သည်
ခ) အကြင်နာမေတ္တာဖြင့် သူထံပြေးလာ၍ သားလည်းပင်းကိုပွေ့ဖက်၍နမ်းသည်။
၁၀။ ကျွန်တော်သည်သခင်ယေရှုကို ကယ်တင်ရှင်အဖြစ် ယုံကြည်ခဲ့လျှင်
က) ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်ကိုခွင့်လွှတ်သည်၊ ကျွန်တော်၏အပြစ်ကြောင့်သူမပျော်ရွှင်နိုင်သေးပါ။
ခ) ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်၏အပြစ်အားလုံးကိုခွင့်လွှတ်သည်၊ ယခုသူသည်စိတ်နှလုံးအပြည့်အ၀ဖြင့် ကျွန်တော် ကိုချစ်သည်။၃၄ယေရှုက လည်း၊ အိုအဘ၊ သူ့တို့၏အပြစ်ကိုလွှတ်တော်မူပါ။ သူတို့သည်ကိုယ်ပြုသောအမှုကိုမသိကြဟု မြွက်ဆိုတော်မူ၏။
ခရစ်ယာန်များအတွက် ထူးခြားချက်မှာ မိမိအပြစ်များကို စိတ်နှလုံး၊ ကျိုးပဲ့ကျေမွစွာ၊ ၀မ်းနည်းစွာဖြင့် ၀န်ခံခြင်းအားဖြင့် အဘဘုရားသခင်၏ ခွင့်လွှတ်ခြင်းကိုခံရပါသည်။ မကောင်းမှု၊ အပြစ်ကို ထပ်မံလုပ်မိကောင်း လုပ်မိမည်ဖြစ်သော်လည်း ဘုရားသခင်ထံ မျက်ရည်ဖြင့် ဒူးထောက်ဝန်ချတောင်းပန်ခြင်းဖြင့် သင့်ကိုခွင့်လွှတ်ပေးသည့် အလွန်ကြီးမားလှသော မေတ္တာရှင် ဘုရားဖြစ်ပါသည်။ ကိုယ်လုပ်တာ ..ကိုယ်ခံ ဆိုသည်မှာ ခရစ်ယန်များအတွက် ၁၀၀ရာနှုန်းမဟုတ်ပါ။ ကျိုးပဲကြေမွသောစိတ်နှလုံးဖြင့် ဘုရားထံ ယုံကြည်စွာဖွင့်ဟ ၀န်ခံပါ။ ကျွန်ုပ်တို့အား မေတ္တာရှင်ဘုရားက ခွင့်လွှတ်ပါသည်။ သမ္မာကျမ်းစာ ရှင်လုကာ ၂၃း၄၃ တွင် မိမိကို ကားစင်တင်သတ်သူများကိုပင် ဤသူများသည်မသိ၍လုပ်ကြပါသည်။ ခွင့်လွှတ်တော်မူပါ..ဟူသတည်။
လုကာ ၂၃း၃၄ ယေရှုက လည်း၊ အိုအဘ၊ သူ့တို့၏အပြစ်ကိုလွှတ်တော်မူပါ။ သူတို့သည်ကိုယ်ပြုသောအမှုကိုမသိကြဟု မြွက်ဆိုတော်မူ၏။